Ny fanamboarana fantson-drano ny PEX A Manufacturers and Suppliers Pipe - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > PEX fitaovana fandoroana plumbing > PEX A sy PEX B > Feno fantsona fantson-drano PEX A Pipe
Feno fantsona fantson-drano PEX A Pipe
Ny orinasa WENAP dia miompana amin'ny famerenana, famokarana sy fivarotana karazam-pamokarana avo lenta pp-r pp-r fantsom-pifamoivoizana fantsom-pandrefesana fanamafisam-peo sy fitaovana, fantsom-pitaovam-baravarana ary fantsona maro. Ny vokatra azonay dia misy andiany sivy, anisan'izany ireo rafitra PP-R, ny fitaovana fitrandrahana aluminium plastika aluminium, ny alim-bary alika, ny alim-bary, ny rafitra rano, ny rafitra fantsom-pitaovana, ny PP-X ary ny plastika PP-R rafitra, rafitra valifaty ary kofehy & amp; Ny fitaovam-pifamoivoizana varahina varahina rehetra. Ny vokatra rehetra dia vita amin'ny tolotra ara-teknika ambony indrindra, ary mampiditra ny teknolojia fanorenana farany.
Product Introduction of the Underfloor Heating Tubes PEX-A Pipe
Saika ny PEX rehetra ampiasaina amin'ny fantsona sy ny fantsona dia vita amin'ny polyethylene avo lenta (HDPE). Ny PEX dia ahitana fifamatorana mifamatotra amin'ny rafitra polymère, manova ny thermoplastika amin'ny thermoset. Ny fifandraisana mivelatra dia vita na aorian'ny fampidirana ny tavoahangy.Ity dia manome safidy tsara ho an'ny fitaovana fantsom-pahadiovana, mamirapiratra sy hydronic amin'ny fampiharana fantsom-pambolena sy ara-barotra. Raha mifangaro miaraka amin'ny fitaovana fanenotena, fanamafisam-peo, valifaty ary fitaovana hafa, Ny pipa PEX dia manolotra ny fomba haingana indrindra hanodinana ny tetikasa rehetra.
Product Parameter amin'ny tavoahangy fantsona ambanin'ny tany PEX-A Pipe
Feno fantson-drano fantsom-biby PEX-A Pipe
8--63mm (3/8 "-2")
Fotsy, fotsy, mena, manga, maitso ary loko hafa araka ny filàn'ny mpanjifa.
1.ASTM F876 / 877 ho an'ny USA
2.CSA137.5 HO AN'NY Kanada
3.ISO15875 HO AN'NY EU
-75 ° C hatramin'ny 95 ° C
Fifandraisana mivantana amin'ny fifandraisana
Carton, kitapo kely miaraka amin'ny kitapo kely kely sy ny volo ho an'ny filan'ny mpanjifa.
Ao anatin'ny 35 andro aorian'ny fandoavana
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiharana ny fantson-drano fantson-drano ao PEX-A
Pex-APipe avo lenta avo lenta pex
1) Tempoly avo lenta: -75 ° C hatramin'ny 95 ° C
2) tavoahangy fantson-damba anatiny, voka-dratsin'ny rivotra, be dia be
3) Fiainana lava lava (50 taona miasa eo ambanin'ny 70 ° C)
4) Mora mitebiteby, tsy misy fikomiana
5) Maivana, mora entina sy mitahiry
6) sodina kely, mihena ny takaitra
7) Mora ampiasaina, fampiharana be dia be, misy fifandraisana vitsivitsy sy fitaovana
-Cool Hot Water Sodina System
Fanadiovana gazy fiara
- FANAMPIANA eo ambanin'ny rafitra fandroana
-Fanarahana rafi-pifanarahana amin'ny toby fanadiovana mandeha amin'ny rivotra
-Medical, Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny orinasa Chemical Industry
Product Details momba ny fantson-drano fantson-drano PEX-A Pipe
Packaging Details:5m / lava, 50m / horita, 100m / horonan-tsary, 200m / roll Carton, kitapo kely misy kitapo kely kely ary ny volo ho toy ny filan'ny mpanjifa.
Fandefasana:Fitaterana an-dranomasina sy fitaterana an-dalamby na araka ny filàn'ny mpanjifa.
Hot Tags: Feno fantsona fantson-drano PEX A Pipe, China, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any Shina, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, haingana, vidin'ny vidin-tsolika, quotation,
Pex Warm Floor mitandahatra ho an'ny tsena EoropeanaHot Water PE-Rt Pex plastika mitandahatra tavoahangy ho an'ny ati-drano
PEX B Pipe ho an'ny fitaovana fandoroana plumbing